Iapile kunye neapos; s beats powerbeats pro zitshiphu kunanini na zithengwa ngeyona ndlela, kodwa hayi ixesha elide
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo Iapile & apos; s Beats Powerbeats Pro zitshiphu kunanini na kwiBest Buy, kodwa hayi ixesha elide
Iapile & apos; s Beats Powerbeats Pro zitshiphu kunanini na kwiBest Buy, kodwa hayi ixesha elide
Njengoko kucetyisiwe ngu ingxelo yentengiso ikhuphe iinyanga ezimbalwa emva , Apple & apos; Olona khuphiswano luphezulu kushishino lwenyani lwee-earbuds eziyinyani olunokuthi lube ... I-Apple kunokuba Isamsung , Xiaomi , JBL , Isony , kunye nezinye iinkampani ezininzi ezinkulu nezincinci ezibandakanya umlo ii-AirPod eziyimpumelelo zonke iiveki okanye njalo.
Oko & apos; kucacile ngenxa yokuba yenziwe yiApple Ibetha iPowerbeats Pro zibiza kakhulu kunendlela ozifumana ngayo phakathi kwee-AirPods, ezenza itekhnoloji esekwe eCupertino imali engaphezulu kuneSamsung, umzekelo, ifumana kwiGlobal Buds yayo. Kodwa ngokungafaniyo neApple kunye neeapos ezikhokelela kwintengiso kwiiAirPods, iPowerbeats Pro inokuthengwa rhoqo ngezaphulelo kubathengisi abagunyazisiweyo abafana IAmazon okanye Eyona Ntengiso .
Jonga isivumelwano apha
Le yokugqibela inombala omane onokukhetha kuwo kwezi ntloko ziyinyani ezingenazingcingo kwimidlalo ezithengiswa ngexabiso eliphantsi kunanini ngaphambili le- $ 129.99 iperi, emele i-120 yeedola enkulu kwi- $ 249.99 MSRP. Oko kukuphulukana neepesenti ezingama-48, kodwa kubalulekile ukubonisa ukuba ezi ayizizo iiyunithi ezintsha kraca esithetha ngazo apha. Endaweni yokuba ujonge iGeek Squad ehlaziyiweyo yezixhobo, nto leyo ethetha ukuba liQela leeNgcono lokuthenga kunye neapos; yokusebenza ngokupheleleyo kunye nenqaku elitsha elitsha lePowerbeats Pros.
Kuhlolwe ngamandla ukuqinisekisa ukuba 'owona mgangatho uphezulu wentsebenzo kunye nomgangatho' uyafezekiswa, kwaye ucoceke kakuhle kwaye ubuyiselwe useto lwefektri yoqobo, ii-earbuds eziyinyani ezingenazingcingo ezingama- $ 130 nazo mazize newaranti yeentsuku ezingama-90, nangona i-Best Buy ingenayo & apos; t chaza ngokucacileyo ukuba kwiphepha lewebhu elisemthethweni lemveliso.
Ifumaneka ngombala omnyama, 'weendlovu', 'weenqanawa', kunye nowe 'moss', iPowerbeats Pro ayenzi sivumelwano xa kufikwa kumgangatho weaudiyo nakubomi bebhetri ngelixa uthembisa ukubonelela 'ngentuthuzelo enobunzima kunye nozinzo.' Xa kuthelekiswa ne- IProPods Pro , aba bafana babi abanayo itekhnoloji esebenzayo yokurhoxisa ingxolo okanye ityala lokutshaja ngaphandle kwamacingo eliya kubo, kodwa ngokumangalisayo ngokwaneleyo, iPowerbeats Pro inokuhlala kabini ukuba 'babazala' babo ngentlawulo enye.
Awuzukufuna ukukhupha i-trigger ngokukhawuleza okukhulu ukuba awukhathali ukufumana ezi ntsana zifikelelekayo zikwimeko ehlaziyiweyo, njengeyona nto ibalaseleyo yokuthenga kunye neepos; Isivumelwano sokubulala siza kuphelelwa lixesha.
I-iphone 12 vs inqaku 20 ye-ultra
I-nexus 6 xa kuthelekiswa ne-samsung s6
IPhone 8 64gb vs 256gb
I-ZeroLemon ivula ityala le-10,000mAh elihlanyayo le-Galaxy Note 3
Amaxabiso omda we-Galaxy S7 kunye ne-S7, izicwangciso zokuhlawula kunye nezipho kwiVerizon, AT & T, T-Mobile nakwiSprint
Ityala lokumangalela i-AT & T ngokuqhuba 'ngesithiyelo kunye nesikimu sokutshintsha'
Ukunyusa iselfowuni kuphehlelela ngokufikelelekayo ngefowuni ye-11 yefowuni ngebhetri 'yemini yonke'
Indlela yokuvumelanisa izithethi ezininzi ze-smartphone kunye nokwenza inkqubo yesandi ye-ad-hoc
Idili: Kuvulwe umda we-Samsung Galaxy S7 kwintengiso nge $ 475 nje kwi-eBay
Intengiso ye-Insane ye-AT & T izisa i-iPhone XS, i-iPhone X, kunye ne-iPhone 8 Plus iimeko ezantsi ukuya kwi-5 yeedola
I-Verizon ityhala uhlaziyo lwesoftware kwi-Galaxy S6, i-s6 edge, i-S6 edge +, kunye neNqaku 5: Nazi izinto ezintsha kunye neapos;